Hopitaliben’Androva- Mahajanga Velon-taraina ny mana-marary
Tsy misy azo ilazana azy ho hopitalim-panjakana ny ao amin’ny hopitaliben’Androva ao Mahajanga ao raha ny fitarainan’ny renim-pianakaviana iray niara-niala sasatra tamin’ny fianakaviany tao amin’ity renivohitr’i Boeny ity.
Areti-mifindra Olona 5 matin’ny pesta
Miseho hatrany izao karazana loza sy fahasahiranana samihafa izao. Raha ny tatitra azo,
iray ity hahafahana mampitombo ny hery fiarovana efa hananan’ny zaza. Hotanterahina manomboka ny 12 aogositra ho avy izao indray haharitra telo andro ny FAV Polio andiany faha-15 karakarain’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Distrika 55 misandrahaka amina faritra folo no voakasik’izany toy ny Faritra Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Melaky, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Atsimo Andrefana, DIANA ary SAVA. Tanjona ny hahafahana mamita vaksiny ireo zaza latsaky ny dimy taona miisa 2.542.712 ao anatin’ny telo andro hanaovana ny hetsika. Mpiasan’ny fahasalamana miisa 1.695 no indray hohetsehina mandritra izany miampy mpanentana ara-pahasalamana 32.830. Hampiavaka ity andiany faha-15 ity moa ny fisian’ny ekipa manokana hitety ireo sekoly, toeram-piantsonan’ny fiarakodia ny tsena ary ny isan-tokantrano. Tsiahivina hatrany moa fa ny zaza iray tsy vita vaksiny iadiana amin’ny aretina lefakozatra dia mety hamindra ity aretina ity amin’ireo zaza hafa 200 manodidina azy.